မွတ်စလင်တယောက်၏....ရင်တွင်းစကား.....(ပေးစာ - ၁၅၆) ~ Myanmar Express
မွတ်စလင်တယောက်၏....ရင်တွင်းစကား.....(ပေးစာ - ၁၅၆)
From : ကိုပေါက်ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့် ယုံကြည်ချက်နဲ့ မွတ်စလင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဆန္ဒအရဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ဟာ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ပေါ့။ နှလုံးသားအရတော့ ဂျူးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ခြုံကြည့်လိုက်ရင်တော့ ကျွန်တော်ဟာ လူသားတစ်ယောက်ပါ။ ဒေါက်တာ ဟာမစ်ဆိုတာ တယူသန် မွတ်စလင်တွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ စာရေးဆရာ၊ အီဂျစ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာ မွတ်စလင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မွေးလာတယ်။ ကျွန်တော့်ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အစ္စလာဟ်ဘာသာဝင်တစ်ဦးလိုပဲ နေခဲ့တယ်။ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ကျွန်တော်နဲ့ဘ၀တူ မွတ်စလင်တွေက ကမ္ဘာ့အနေရာအနှံ့အပြားမှာ လုပ်ဆောင်နေကြတာကို တွေ့ပြီးနောက်မှာ၊ ပြီးတော့ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားက အစ္စလာဟ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုများကို တွေ့မြင်ရဖန်များလာပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်တော့်မှာ ခံစားချက်လေးတစ်ခု ပေါက်ဖွားလာခဲ့တယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်ဟာ မွတ်စလင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို လူသားတစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက် အမှန်တရားကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားဖို့ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ပါ။ ဒီခံစားချက်က အစ္စလာဟ်ဘာသာနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ကပ်ဘေးတွေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတိုက်ပွဲတွေကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော် ၀န်ခံပါတယ်။ လက်ရှိ အစ္စလာဟ်တရားတွေဟာ မွတ်စလင်မဟုတ်သူတွေအပေါ် အမုန်းတရားနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဖန်တီးပေးနေတယ်ဆိုတာကိုပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေဟာ ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒီနေ့အချိန်အထိ မိန်းမအများကြီးယူတဲ့စနစ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်တယ်။နောက်ပြီး မွတ်စလင်ကနေ အခြားဘာသာပြောင်းသွားသူတွေကို သတ်ဖြတ်တဲ့အကျင့်တွေက ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေဟာ ကျွန်စနစ်နဲ့စစ်ပွဲတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့နေရာမှာ ပြတ်သားတဲ့ ရပ်တည်ချက် မရှိသေးတာပဲဖြစ်တယ်။ ဆန့်ကျင့်ကန့်ကွက်တာတွေ မလုပ်တဲ့အပြင် အဲဒီကျွန်စနစ်နဲ့စစ်ပွဲတွေကို ဖန်တီးပြီး အစ္စလာဟ်သာသနာပြန့်ပွားအောင်၊ အခြားဘာသာဝင်တွေကို မွတ်စလင်ဖြစ်လာအောင် လုပ်နေကြပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဂျိဇီယာ (Jizia)လို့ခေါ်တဲ့ မတရားအခွန်ငွေတွေ ကောက်ခံနေကြပါတယ်။ (မလေးရှားမှာ တရုတ်လူမျိုးများကို နှိမ်ထားသလိုမျိုး ဖြစ်မည်ဟု ထင်ပါတယ်…စာရေးသူ)ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေဟာ “အစ္စလာဟ်ဘာသာကို လေးစားကြပါ”လို့ ကမ္ဘာ့လူသားတွေကို တောင်းဆိုနေကြတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဗလီတွေမှာ ကြာသပတေးနေ့တိုင်း အခြားအစ္စလာဟ်ဘာသာဝင် မဟုတ်သူတွေကို (အာရဗီဘာသာစကားနဲ့) ဆဲရေးတိုင်းထွာနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာဟ်ဘာသာဝင်တွေဟာ ဂျူးတွေကို ၀က်နဲ့မျောက်ကနေဆင်းသက်သူများလို့ ဆဲရေးတိုင်းထွာကြတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်ကလေးငယ်တွေကို ဘယ်လို မက်ဆေ့တွေ (သင်ကြားချက်တွေ) ပေးချင်တာပါလဲ။ ဒါဟာ မေတ္တာတရားနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး လက်ဆောင်တွေလား။ အမုန်းတရားလက်ဆောင်တွေလား။ကျွန်တော် ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေနဲ့ ဂျူးဘုရားကျောင်းတွေကို ရောက်ဖူးတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေအတွက် ဆုတောင်းပေးနေကြတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့ကို ဆဲရေးတိုင်းထွာနေကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မွတ်စလင်မျိုးဆက်တွေကိုလည်း သူတို့ (အခြားဘာသာဝင်တွေ)ကို မုန်းတီးရွံရှာဖို့နဲ့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများအဖြစ် ခေါ်ကြဖို့ သင်ကြားပေးနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်က “မိုဟာမက်ဆိုတာ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေအပေါ်မှာ ကာမစပ်ယှက်သူ”လို့ စွပ်စွဲတဲ့အခါ မိုဟာမက်ကို ကာကွယ်ဖို့ ချက်ချင်းဆိုသလို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကြိမ်းမောင်းကန့်ကွက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မွတ်စလင်တွေဟာ အစ္စလာဟ်ကျမ်းစာမှာလာတဲ့ “တမန်တော် မိုဟာမက် အသက် ၅၀ ကျော်သောအခါ အသက် ၇-နှစ်မျှသာရှိသေးသော အမျိုးသမီးငယ်လေးကို လက်ထပ်တော်မူတယ်”ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ ဂုဏ်ယူပြောဆိုနေကြပြန်ပါတယ်။ပြောရမှာတော့ ၀မ်းနည်းပါတယ်။ မွတ်စလင်များစွာဟာ (အားလုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး) အမေရိကန်က ဝေါထရိစင်တာကို ၀င်တိုက်တဲ့ စက်တင်ဘာ ၁၁-ရက်အဖြစ်အပျက်နဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားက အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ကြားရတိုင်း ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့မီဒီယာရှေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေဟာ ဒီလို အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချကြောင်း ကြေညာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကို မွတ်စလင်တွေဟာ သဘောခွေ့နေကြပါတယ်။ လျစ်လျူရှုထားကြပါတယ်။ သူတို့ အကြမ်းဖက်ရခြင်းအကြောင်းကိုတောင် ရှာကြံပြီး အကြမ်းဖက်သမားတွေကို သနားနေကြပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ ဘယ်အစ္စလာဟ်အဖွဲ့အစည်းက အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် ဘင်လာဒင်ကို “ဘာသာရေးသွေဖီသူ၊ အစ္စလာဟ်တရားတော်ကို ချိုးဖောက်သူ”လို့ တရားဝင်ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပါသလဲ။ ရှေ့နောက်မညီတာတစ်ခုက စာရေးဆရာ ရပ်ခ်ျဒိုင်း (Rushdie)ကိုတော့ အစ္စလာဟ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့စာအုပ် ရေးသားမှုနဲ့ သေဒဏ်ပေးသင့်ကြောင်း ကြေညာပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေဟာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေ ပိုရဖို့ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာ တောင်းဆိုနေကြတယ်။ ဥပမာ ပြင်သစ်မှာ ခေါင်းမြီးခြုံခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်းကိစ္စကို ပယ်ဖျက်ဖို့ တောင်းဆိုနေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ တကယ်လုပ်သင့်တာက ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အစ္စလာဟ်အစွန်းရောက် လူသတ်သမားတွေကို ဆန့်ကျင်ကြဖို့ အားပေးအားမြှောက်မပြုကြဖို့နဲ့ အစွဲအလန်းတွေ သိပ်မကြီးကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေဟာ အခုထိ ဒါတွေကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း၊ အားပေးအားမြှောက်မပြုပါကြောင်းဆိုတဲ့ ဆန္ဒတွေ မဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကို မဖော်ပြဘဲ တိတ်တိတ်ကလေး နေနေကြတာဟာ အစ္စလာဟ်အကြမ်းဖက်သမားတွေကို သတ်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လုပ်ဖို့၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဆက်လုပ်ဖို့ အားပေးနေတာ၊ တိုက်တွန်းနေတာ၊ စွမ်းအင်တွေ ဖြည့်ပေးနေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှတာတွေအတွက် အစ္စရေးလူမျိုးတွေနဲ့အခြားသူများအပေါ်ကို အပြစ်တင်၊ လက်ညှိုးထိုးနေကြတာကို ရပ်တန့်ပစ်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် မွတ်စလင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရိုးရိုးသားသား ပြောရရင် အစ္စရေးနိုင်ငံဆိုတာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ မီးရှူးတန်ဆောင်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုရဲ့အလင်းရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးများရဲ့ စံထားရာနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အာရပ်နိုင်ငံတွေဟာ ကရုဏာတရားမဲ့စွာနဲ့ ဘာနစ်နာကြေးမှမပေးဘဲ ဂျူးလူမျိုးတွေကို ပထုတ်နေကြတယ်။ “လွတ်လပ်သောဂျူးနိုင်ငံတော်”ကို ခွင့်မပြုကြဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အစ္စရေးလူမျိုးတွေကတော့ အာရပ်လူမျိုးသန်းပေါင်းများစွာကို သူတို့နိုင်ငံသားအဖြစ် သူတို့မြေပေါ်မှာ လက်ခံပေးထားပါတယ်။ ဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့ အခွင့်အရေးတန်းတူ ခံစားခွင့်ပေးထားပါတယ်။အစ္စရေးမှာ အမျိုးသားက အမျိုးသမီးတွေကို တရားဝင် ရိုက်နှက်ခွင့်မပြုပါဘူး။ လူတိုင်းလူတိုင်း ဘာသာတစ်ခုကနေ ဘာသာတစ်ခုကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောင်းနိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ အစ္စလာဟ်မှာလို ဘာသာပြောင်းလဲခြင်းဥပဒေအရ သတ်ဖြတ်ခံရမှာကိုလည်း ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစ္စလာဟ်နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလို အခွင့်အရေးမျိုးကို ရနိုင်လို့လား။ ဒီအခွင့်အရေးမျိုးကို ခံစားကြရလို့လား။ (ဒါဆိုရင် ခင်ဗျားက အစ္စရေးဘက်တော်သား မွတ်စလင်လားလို့ ကျွန်တော့်ကို မေးလိမ့်မယ်)။ကျွန်တော်အနေနဲ့ ပါလက်စတိုင်းက မွတ်စလင်တွေ ဒုက္ခခံစားနေရတယ်ဆိုတာကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ဒုက္ခခံစားနေရတာတွေဟာ အစ္စရေးတွေ(ဂျူးတွေ)ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ပါလက်စတိုင်းက အကျင့်ပျက်ခြစားနေတဲ့ (ပျက်စီးနေတဲ့)ခေါင်းဆောင်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံမှာနေတဲ့ အာရပ်လူမျိုးတွေ အာရပ်တိုင်းပြည်တွေမှာ နေချင်လို့ဆိုပြီး ထွက်ပြေးတာကို တွေ့မြင်ရဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ထောင်သောင်းများစွာသော ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး မွတ်စလင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ရန်သူတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ အစ္စရေးမှာ ပျော်ရွှင်စွာ အလုပ်လုပ်ဖို့ အစ္စရေးနယ်မြေထဲကို ၀င်နေကြပါတယ်။ အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပြောနေကြသလို အစ္စရေးတွေက ဆိုးဆိုးဝါးဝါး လူမဆန်စွာ ဆက်ဆံကြတယ်ဆိုရင် ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေ (ပါလက်စတိုင်းတွေက အစ္စရေးနယ်မြေထဲ မ၀င်ဘဲ၊ အစ္စရေးထဲက အာရပ်တွေကသာ ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေထဲ ၀င်နေကြမယ်ဆိုတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေ… စာရေးသူ) တွေပဲ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ပြဿနာကိုယ်လက်ခံပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြေရှင်းကြရပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှသာ လူသားထုတစ်ရပ်လုံးနဲ့ ညီညွတ်မျှတစွာနေနိုင်မယ့် ခေတ်သစ်တစ်ခုကို စတင်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့-မယားများစွာယူခြင်း၊-အရွယ်မရောက်သူများကို လက်ထပ်ခြင်း၊-ကျွန်စနစ်၊-အစ္စလာဟ်ဘာသာကို သွေဖီသူများကို သတ်ဖြတ်ခြင်း၊-အမျိုးသမီးများကို ရိုက်နှက်ခြင်းနဲ့-အစ္စလာဟ်ဘာသာပြန့်ပွားရေးအတွက် မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံများကို စစ်ကြေငြာခြင်းဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ထင်ထင်ရှားရှား၊ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ကြဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ ဒီလို လုပ်ဆောင်ပြမှသာလျှင် “ကျွန်တော်တို့ဘာသာကို လေးစားကြပါ”လို့ အခြားသူတွေကို တောင်းဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေအနေနဲ့ “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်တတ်တဲ့အကျင့်”တွေကို ရပ်တန့်ဖို့ အချိန်ကျရောက်ပါပြီ။ ပြီးတော့ ဒီအချိန်ဟာ “ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေ ပြောင်းလဲရမယ်”လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရမယ့်အချိန်ပါပဲ။Myanmar Express
Posted in: ပေးစာ,မြန်မာ-ကုလား အဓိကရုဏ်းများ
17 July 2012 11:08
Is it real true, this article is written by Muslim? It doesn't matter whoever wrote it, this is very good article. I agree Christians do not hate Muslims but Muslims' greatest enemies are Christians. Many Muslims are killing Christians and burning the Churches in the world but Christians are praying: "Oh God, please touch the Muslims' hearts and change their hearts and don't let them to kill the Christians and any others ......." You know why? Because Jesus said: "Love your enemy", Christians know Muslims are their enemies, but Christians can pray for their enemies Muslims because of what Jesus said.
17 July 2012 13:06
really if you wanted to know about muslim religion . your all guy should go and read quranmyanmar book. after read this quranmyanmar book then your all guy can talk about muslim good or bad . actually i alsoachristans .
17 July 2012 13:25
SlaveryPedophiliaShariahWomen AbuseChild AbuseGay AbuseDemographic JihadTerrorism JihadCultural JihadPolygamyBeheading Unfortunately, All of these are based on Qur'an. It's Dead End.Look at the Saudi, perfect example of Sharia Islamic Country.-
17 July 2012 14:50
We've already read Qur'an. It's full of shit. .
28 August 2012 16:08
စောက်ရူးလိုလို စောက်ပေါလိုလိုမဟုတ်တာတွေရေး မဟုတ်တာတွေပြော မင်းရေးထားတဲ့စာတွေဖတ်ကြည့် ရူးသလို ကြောင်သလိုနဲ့ မဟုတ်မဟတ် တွေရေး မင်းပြောထားတယ်စာထဲမှာ အခြားဘာသာက မူဆလင်ထဲဝင်လာရင် ဘုရားဆင်းတုတော်ကို ဖျက်စီးရတယ်ဟုတ်လား မင်းအဖေ ဘယ်သူကပြောပြတာလဲ မင်းကို $ ရူး -ီးဘဲ မဆဲချင်ဘူး မင်းကရော မြန်မာနိုင်ငံသားစစ် လို့လား $ ရူး ရဲ့
i agree with Datthagiri.Anonymous,u r wrong something.Check with intelligent person.Don't learn urself.
4 September 2012 10:47
You should respect other author's opinions.They pointed out what they found in that religion literature & practice.Please, if you don't understand English, just keep quiet. Be clever. Be polite. PostaComment
လူဦးရေ တစ်သိန်းအထက်ရှိသော အချက်အချာမြို့ကြီး ၃၁ြ...
အမျိုးသမီး နဲ့ အမျိုးသား နေရာ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း ...
ကနေဒါသံရုံး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွင့်မည်
အခန်းခ ပိုမို တောင်းခံသည့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှ...
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ လူဦးရေ...
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့ထားသည့် အက်ဥပဒေ သုံးနှစ်...
PEPSI အချိုရည် ပြန်လည်လုပ်ကိုင်မည်
ဒီမိုကရေစီ အမေရိကန်တွင် ရုပ်ရှင်ရုံအတွင်း ရမ်းကားပ...
မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအနက် ခရီ...
ရေပေါ်ဟိုတယ် တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းအား လာမယ့် အောက်တ...
ဆော်ဒီ သတင်းစာ တွေ၊ ဆော်ဒီ ကာတွန်း ဆရာတွေက လုပ်ကြံ...
အာဆီယံကုန်စည် ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူစာချုပ်ကြောင့် ကား...
Express Times ၀က်ဘ်ဆိုက် hack ခံရ
ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှာ ယခု နှစ်ကုန်တွင...
ကမ္ဘာပေါ်တွင် နေထိုင်စားသောက်စရိတ် အမြင့်ဆုံးမြို့ကြ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဒီမိုကရေစီ မိတ်ဆွေမျာ...
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ သွာ...
စစ်တွေမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဘင်္ဂလီမူဆလင်-ရခိုင်အ...
ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ ဖျော်ဖြေမှုတွင် လူဦးရေ သုံးထောင်...
စစ်တွေ GTC ၌ ကျောင်းသားဦးရေ သုံးပုံတစ်ပုံသာ ကျောင...
အခြေခံ လုပ်ခလစာ တွက်ချက်ရန် အတွက် UMFCCI ထံမှ သဘော...
မောင်တော ဆူပူမူနှင့် ဆက်စပ် ဖမ်းဆီးခံရသူ ဒေါက်တာ ထ...
ဟက်ကာများကြောင့် အင်တာနက်လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်သင့်...
သူခိုးက လူဟစ်သည် BBC
မြန်မာ-အမေရိကန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆု...
ပူတင်နှင့်အာနန်တို့ ဆီးရီးယား အရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး...
၀န်ကြီးဟောင်းဦးဗဂျမ်း၏ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ 'ခေါင်းဆေ...
မြန်မာ့ပထမဆုံး အားကစားတက္ကသိုလ် ဖွင့်လှစ်တော့မည်
ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ အာဇာနည်တွေကို လုပ်ကြံဖို့ ဗြိတိသျှ အ...
ချေးငွေပြန်မဆပ်နိုင်သော တောင်သူများ၏ လယ်မြေ လုံးဝမ...
အာဇာနည်နေ့ (သို့) နိုင်ငံတော် လုပ်ကြံမှူကြီးရဲ့ အေ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက် (ရန်ကုန်) ဖွင့်လှစ်ထား
စစ်တွေ နည်းပညာကျောင်းသားများ ဘင်္ဂလီများတိုက်ခိုက်ခြ...
Windows 8 တွင် ပါဝင်လာမည့် Metro Interface
လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ယာယီ ရပ်နားမည်
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ၀င် (၁၉၃) နိုင်ငံအနက် (၁၀၃...
၂၀၁၂ ခုနှစ် (၆၅) နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားကျ...
Burma Campaign (UK) ၏ ဒါရိုက်တာ မာ့ခ် ဖာမနာ (Mark ...
အမေရိကန်၏ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာ လျှော့ချမှု ပ...
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် မှ ဒီမိုမိတ်ဆွေ (၁၀) ပါတီ အာ...
UNHCR မှ မြန်မာလူမျိုးများအပေါ် အနိုင်ကျင့် ခွဲခြား...
အမေရိကန်တွင် မိုးကြိုးပစ်ချသဖြင့် ဘောလုံးကစားသမားန...
အမေရိကန် FDA အသိအမှတ်ပြု ပထမဆုံး HIV ကာကွယ်ဆေးထွက်...
"ဒီမိုမိတ်ဆွေ ၁၀ပါတီ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစ...
ဂျပန်တွင် အပူလှိုင်းဒဏ်ကြောင့် လူတစ်ဦးသေဆုံးပြီး ၆...
အမျိုးသမီးများကို အဓမ္မပြုကျင့်သူများအား ဓာတုဗေဒနည်...
ရွှေတိဂုံဘုရား တောင်ဘက်မုခ်တွင် ယခုနှစ် အတွင်း ဓာတ်...
ယခုဥပဒေဟောင်းဖြင့် မြှုပ်နှံပြီးသူများအနေဖြင့် နို...
လန်ဒန်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ မြန်မာက အားကစားနည်းငါးမျို...
အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ထုတ်လုပ်သော ကားသစ်တင်သွင်းလျှင...
အမေရိကန်ကုမ္မဏီများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြုပ်...
အမြန်ချောစာများအား ယနေ့ပို့ မနက်ဖြန်ရောက်စနစ်ဖြင့်...
ပြည်ပဘဏ် လုပ်ငန်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု စ...
ဗြိတိန်နိုင်ငံက ရန်ကုန်တွင် ကုန်သွယ်ရေးရုံး ဖွင့်လ...
၅၃ နှစ် အရွယ် ဦးမင်းကိုနိုင် အရေးပေါ် ဆေးရုံတက်
ဘုရင့်နောင် .... အပိုင်း (၂)
ရုပ်သံလွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာအဆင့် သင်တန်းဖွင့်...
အက္ခရာ AA နှင့်စသည့် City Taxi များစတင် ပြေးဆွဲ သွာ...
နိုင်ငံခြား အန်ဂျီအိုများ အပေါ် ရခိုင်၌ ဆန့်ကျင်မူ ...
အမေရိကန် ကုမ္ပဏီတို့ မြန်မာသို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာ
ကျဆုံးသူ ၈ ဦးကို စစ်တွေတွင် သူရဲကောင်း အဖြစ် ဂုဏ်...
ဒုသမ္မတနေရာ မဖြစ်နိုင်တော့မှန်း သိလိုက်ရလို့ ညဘက်တေ...
အလှအပမက်မောမူကြောင့် ဘ၀ပျက်တတ်ကြောင်း ပြည်တွင်း/ပ ...
Facebook တွင်လုံခြုံစိတ်ချစွာရှိနေဖို့အတွက် အကြံပြ...
အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား တက်ရောက်ရန် နိုင်ငံရေးပါတီမျာ...
ပတ္တမြားမှန်ရင် နွံမနစ် ဆိုသည့်စကားအတိုင်းကမ္ဘာ့သြဇာ...
(၆၅) နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား သတင်းတက်ရောက်...
ယနေ့အချိန်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလွန်အရေးကြီးသည့် သမု...
ဧရာဝတီမြစ် ရေနက်စီးကြောင်း ပြောင်းလဲစီးဆင်းမှုကြောင...
နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဆ...
အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် မင်္ဂလာဆောင်ခြင်း ပြည်တွင်း၌ ပြု...
မွတ်ဆလင် လူငယ် တဦးကို သင်္ကန်းဝတ်ပြီး စစ်တွေတွင် ဖမ...
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသူများ အတွက် ဂျီဟက် စစ်ပွဲ ဆင်နွှဲမည်ဟ...
လိင်မှုဆိုင်ရာ စော်ကားသူများကို ဖမ်းမိစေရန် Faceboo...
Eleven Media စာမျက်နှာတွင် အစိုးရအဖွဲ့ နှင့် ဝန်ကြ...
နိုင်ငံတကာအကူအညီလိုအပ်နေသော်လည်း အကူအညီကို မှီခိုေ...
ထိုင်းနယ်စပ် တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း မူးယစ်မှောင်ခို ၈ ...
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ East Village ဟိုတယ်တွင် မီးလောင်...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (ဟင်္သာတမြို...
ရိုဟင်ဂျာအရေး အာဆီယံမှ လေ့လာစောင့်ကြည့်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှလာသော စက်လှေတစ်စီးကို ရေတပ်မှပစ်ခတ်ဖ...
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အိန္ဒိယသံရုံး မီးလောင်
ပုဂ္ဂလိက အာမခံလုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုတော...
မြန်မာမီနီ ဆလွန်ကား စီးရေ ၂၀၀ ရောင်းချပြီး
ဆွေးနွေးပွဲနီးရင် ပိုကြောက်နေတဲ့သူများ . . .
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း စင်ကာပူနိုင်ငံ ဂ...
မြန်မာသံရုံးရှေ့ မွတ်ဆလင် များ ဆန္ဒပြ
လေကြောင်း ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ တည်ထောင် သွားမည်
တာမွေရာပြည့်ဈေး ၁၂ ထပ် ဆောက်မည်
အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ စည်ကားသိုက်မြိုက်စ...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ယာဉ်တိုက်မှု မြင့်တက်
KIA နှင့် မူဆယ်တွင် ဆွေးနွေးရန် တပ်မတော် ထပ်မံကမ်း...
မြန်မာ-ထိုင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များမှ စီးပွာ...
ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ နိုင်ငံရေး မလုပ်သင့်ဟု KNU...
မြန်မာနှင့် အမေရိကန် စီးပွားရေး တစ်ကျော့ပြန်
နေ့စဉ် ရေဂါလန် ၄၅ သန်း ပေးမည့် ငမိုးရိပ် စီမံကိန်း...
ဘဏ်ရုံးခွဲ ဖွင့်လှစ်မှု အတွက် နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော...
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီးမှ ကန်ထရိုက် လုပ်ငန်း ၁၄ မျို...
ရန်ကုန်မြို့တွင်း (တက္ကစီ) အငှားယာဉ်များ သိသိသာသာ မ...